Ubuntu 14.10 dị na nbudata, anyị na-emelite ma ọ bụ na ọ bụghị? | Site na Linux
Ubuntu 14.10 (na ezinụlọ) dị maka nbudata nbudata ma ọ bụ?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa
Companylọ ọrụ ahụ Yoyo Fernández achọghị mmeghe, yana site na netwọkụ Google ọ na-ajụ ajụjụ na-adọrọ mmasị: Ọ bara uru nbudata ma wụnye ihe na-adịbeghị anya Ubuntu 14.10 etinyeworị ndozi Ubuntu 14.04 LTS?
Iji zaa ajụjụ a (site n’echiche m) anyị ga-ebu ụzọ mara ihe akụkọ ndị ntọhapụ a na-ewetara anyị Ubuntu 14.10 na ezinụlọ.
1 Kedu ihe dị ọhụrụ na Ubuntu 14.10
2 Kedu ihe dị ọhụrụ na Kubuntu 14.10
3 Kedu ihe dị ọhụrụ na Xubuntu 14.10
4 Anyị na-emelite ma ọ bụ na ọ bụghị?
Kedu ihe dị ọhụrụ na Ubuntu 14.10
N'okwu a kapịrị ọnụ banyere Ubuntu 14.10 anyị nwere ike ịchọta obere obere (kama obere) mgbanwe na nka, n'okwu a metụtara akara ngosi Homelọ na vidiyo na Nautilus, ọ bụrụ na ịlele njide ahụ, bọtịnụ Maximize ugbu a nwere obere akụkụ .
Nke a abụrụla ihe na-agwụ ike na-agwụ ike mgbe ị tụlere na isi mgbanwe abụghị iji malite rọketi. Naanị ụdị ọhụrụ nke ngwa ndị kachasị ewu ewu agbakwunye, dị ka:
Akụkụ Rhythmbox 3.0.3
ịdị n'otu 7.3.1
Ihe a niile na Linux Kernel 3.16 (mgbe mbipute 3.17 dị ugbu a), nke gosipụtara ụfọdụ ndị ọrụ nsogbu (nke m gụnyere onwe m na ArchLinux) na ụfọdụ akụkụ.
Kernel 3.16 na-eweta ọtụtụ ndozi na nkwado ngwaike ọhụrụ gụnyere nkwado maka ike 8 na ogwe aka 64. Ọ gụnyekwara nkwado maka Intel Cherryview, Haswell, Broadwell na Merrifield sistemụ, yana nkwado izizi maka Nvidia GK20A na GK110B GPUs. Enwere eserese eserese dị mma na ọtụtụ ngwaọrụ sitere na Intel, Nvidia, na ATI Radeon yana nkwalite ọdịyo nke na-akwado Radeon.264 vidiyo encoder. Na nkenke, nkwado dị mma maka ndịna ngwakọ.
Emeela GTK ka ọ bụrụ nsụgharị 3.12, yana QT na mbipute 5.3. Mgbakwunye nkwado maka ndị na-ebi akwụkwọ IPP, Xorg 1.16 nwere nkwado ka mma maka ngwaọrụ ndị na-abụghị pci. Xephyr ugbu a dakọtara na DRI3. Ntọala 10.3 melite nwere nkwado maka AMD Hawaii GPU, nkwado dị mma maka nbudata dri3, yana nkwado mbido maka iji ọhụụ na ngwaọrụ maxwell.
Kedu ihe dị ọhụrụ na Kubuntu 14.10
N'akụkụ ya, Kubuntu 14.10 na-abịa na Plasma 4.14 ọ bụ ezie na n'oge a, ha na-enye anyị ohere ibudata ihe oyiyi na Plasma 5, nke n'ezie ekwesịghị iji ya na gburugburu mmepụta, mana iji nwalee ya ma kpọọ ya dị mma.
Kedu ihe dị ọhụrụ na Xubuntu 14.10
Banyere nke Xubuntu 14.10, ejiri ya pkexec kama nke mmachi iji mee ihe ngosi eserese site na ịnweta mgbọrọgwụ site na njedebe, iji melite nchebe.
Iji mee ememme 'Utopian Unicorn' na aha igosipụta etu o siri dị mfe ịhazi Xubuntu, agba ndị pụtara ìhè na-acha pinki pinki na mwepụta a, mana echegbula onwe gị, enwere ike nkwarụ site na gtk-theme-config, na njikwa njikwa. Naanị anyị ga-agbanyụọ nhọrọ ndị na-egosi Omenala gosipụtara, ọ bụ ya.
Ma ọ bụghị ya, a na-etinye mgbakwunye Xfce Power Manager ngwa ngwa na panel ahụ, a ga-ahọpụta Ihe nke isiokwu ọhụrụ maka Ctrl + Tab na ngwụcha nke òké.
Anyị na-emelite ma ọ bụ na ọ bụghị?
Hụ ozi ole na ole, oge eruola ịza ajụjụ a: Ọ bara uru imelite?. Azịza ya pụrụ ịdịgasị iche dabere na nke onye ọ bụla masịrị ya na mkpa ya. Ndị nwere nsogbu ụdịdị ahụ agaghị ala azụ ime ya upgrade n'oge na-adịghị, Otú ọ dị, echiche nke onwe m bụ na ọ bụghị ihe kwesịrị ime.
Versiondị Ubuntu 14.10 a na ezinụlọ ya agaghị enwe nkwado ọ bụla ma ọ ga-abụ na mgbe mbipute 15.04 ga-apụta (ọ bụrụ na ọ pụta) na anyị ga-agbanye ọzọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta nkwado ka mma.
M ga-adụ ọdụ na ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịnwale, budata ISOS wee nwalee ya na ọnọdụ LiveCD nke mbụ, na-ahụ na akụrụngwa kọmputa gị niile na-arụ ọrụ nke ọma, mana mgbanwe ndị agbakwunyere adịghị mkpa dị ka ịwụnye ọzọ ma ọ bụ mee Nweta nkwalite. Ma m kwughachiri, nke ahụ bụ mkpebi onye ọ bụla.
Ọ bụrụ na ịchọrọ imelite site na 14.04, naanị ị ga-agbaso ntuziaka ndị a n'okpuru:
Anyị na-pịa Alt + F2 wee dee "mmelite-njikwa" (na-enweghị isi okwu).
Mmelite Njikwa kwesịrị imeghe ma gwa anyị: Enwere mwepụta ọhụrụ dị.
Anyị pịa Mmelite ma soro ntuziaka ndị ahụ.
Jisie na nke ahụ !! 😉
Foto wepụtara site na OMGUbuntu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 14.10 (na ezinụlọ) dị maka nbudata nbudata ma ọ bụ?
Ghaghị ịdị na-eleru anya nke ọma ịghọta na naanị akara ngosi 2 gbanwere na panel nautilus ... lee onye ahia!
Zaghachi na taregon
Lee .. XD
Anọ m na-eche 14.10 ịmalite ịwụnye ya * ma ọ bụ *
PS Ọzọkwa ntụpọ nke akara ngosi nbudata dị obere: v
You na-ahụta ya dị mkpa iji melite Ubuntu Studio?
Zaghachi Pablo Ivan Correa
Ọ bụrụ n ’ọrụ ị na-adị kwa ụbọchị, ị ga - achọ“ ozi ọma ”Ubuntu Studio tinyere, ma ọ bụ sọftụwia ndị toro eto karị, ọ nwere ike ee.
Ebe ụfọdụ na ịntanetị m gụrụ na enwere ike ọ nweghị ubuntu 15.04 ma ọ bụ na mgbe nke a gasịrị ọ ga-atọhapụ ntọhapụ!, Nwee ma ọ bụ not
Ọ bụ ya mere m ji sị "ọ bụrụ na e nwere 15.04" .. 😉
Nke bụ eziokwu bụ na mmelite Ubuntu bụ ezigbo ihe mgbu, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m ga-etinye kọmputa ahụ n'otu oge mgbe m gbalịsịrị ime nwelite zuru ezu.
Na ọnụego nke "extra" ga - arụnyere iji nwee ike nwee nke a ma ọ bụ mmemme ahụ ...
Ọ karịrị afọ abụọ kemgbe m kwagara Arch na enwere m obi anụrị. Ndo ma ọ bụrụ na m kpasuo mmadụ iwe ma agaghị m alaghachi Ubuntu ma ọ bụ onye nzuzu.
V bụ maka Vivid
Onweghi otutu Fans di ubunto, kedu mgbe ha ga eji weputa sistemụ ubuntu a ekwenti?
Zaghachi na ngosi
NA LUBUNTU ???? Ngwanụ, ekele, ekele m eziga? Nwoke, ọ bụrụ n’ị ga-akpọtụ alaka ụlọ ọrụ, kpọọ ha niile. Amaghị m, m na-ekwu.
Onwe ya, Lubuntu amachaghị nke ọma, kpụghara agbatị nke LXDE, ọ na-eweta ubuntu-touch-ụda, nke ziri ezi bụ ụdị kacha ọhụrụ nke xorg, nkwado maka ọba akwụkwọ QT5.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ Lubuntu, ị nwere ike ịhọrọ ibelata ngwa Trisquel 0 na 7.0, na-ahapụ naanị xorg, lxterminal, pcmanfm, lxsession na lxde-core.
Mgbe ahụ ị hazi isi mmalite.list:
sudo nano /etc/apt/sources.list [Enwere m iwebata gị:]
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ a na-ejedebe njedebe ụwa
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ nchebe-nchebe kachasị egbochi eluigwe na ala multivers
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic-mmelite isi machibidoro eluigwe na ala multivers
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ a na-ekwu na mbara igwe nwere njedebe ga-egbochi ụwa
deb http://mirror.cedia.org.ec/ubuntu/ utopic-backports isi amachi eluigwe na ụwa multivers
sudo apt-nweta mmelite && sudo apt-get dist-upgrade
Mgbe ahụ ịnwere ike ịwụnye nchịkọta dị ala, dị ka grub-coreboot.
Yabụ ị ga - enweta sọftụwia kachasị mma yana ihe kacha mma na - emepe emepe
Lubuntu 14.10 dị, ọ na-ekwu ya otu wiki site na Ubuntu, mana ka ka no na ngalaba beta.
M wee weghachite ihe ekwuru ma n'ezie elav ga-eme puru iche ederede maka Lubuntu mgbe odi.
Hey Chere! Ọ dịlarị! N'ezie, ọ bụ kemgbe onye ọ bụla pụta. M ebudatara ya n'otu ụbọchị ahụ ọ bụghị beta ma ọlị. Akụkụ dị iche zuru ezu ebe ha kpọrọ ya wee kwuo (ọ bụrụ na ịchọrọ) "ọ naghị eweta ọtụtụ."
Kedu ụdị ihe nwute bụ nke a. Tupu onye edemede ahụ nwere mmasị Openbox (echere m)
Ọfọn, maka ndị nwere Lubuntu arụnyere, nkwalite mmezu zuru ezu. N'okwu m, ana m aga n'ihu na Openbox na PC m abụọ ka XFCE wee nwee ike iguzo na ụdị Debian (Wheezy na Jessie). Ọ bụ ezie na Debian Jessie na-achọ ịbanye n'oge ahụ, ihe ndozi a na-abịa oge ọ bụla m mere mmelite (Echere m na Ubuntu 14.04 ga-enwerịrị ihe ndị dị mkpa karịa Debian).
Nwa nledo dijo
Otu ajụjụ, nsụgharị a ọ na - arụ ọrụ na SystemD?
O doro anya ee, ọ bụrụ na ịchọghị iji ya ị nwere nhọrọ iji slackware ma ọ bụ gentoo.
Ndoo wute gi, mana enwere m PC na Ubuntu 14.10 a ma adighi m ahu systemD ebe obula, o na agbaso Upstart na ndabara (nke ka nma, amaghi m systemD). Ihe m nwere ike ileba anya bụ na ugbu a ị nwere ike iwunye sistemuD site na ụlọ ọrụ gọọmentị ma ị nwere ike iji ya malite na ee ma wepụ ihe niile nke Upstart ma ọ bụrụ na-amasị gị, nke ruo mgbe 14.04 agaghị ekwe omume.
Onwe m nwere mmelite rere ure, anaghị m akụ ha, ha bụ nsogbu, na-eme akwụkwọ nkwado iji gbanwee, onye ọrụ ọ bụla (enwere nde) ihe niile ha chọrọ bụ ka PC ha rụọ ọrụ ma dị mma nke ọma. Mmezi Mozilla dịka ọmụmaatụ, ọbụlagodi na m lelee igbe "emegharịla", ọ na-emelite m agbanyeghị, ọ na-abata na ngwakọta Ubuntu ... maka obere nkọwa a, ọ bụ na agbanyụọla ọtụtụ tinye na ụfọdụ enweghị emelitere maka ihe karịrị otu afọ dị ka ForeCastFox. My distro bụ Voyager, dabere na Xubuntu, mana m na-eche na m ga-agagharị, abụghị m onye ọrụ aka, enweghị m ahụmịhe ma m na-arịọ maka enyemaka iji melite, agbanyeghị na Windows boot abụọ m site na 2005 gara n'ihu na-arụ ọrụ ... 3 afọ gara aga agara m Linux, ọ masịrị m, mana mmelite na-achọgharị m ...
M na-eche na-aga ụfọdụ inyefe
tinye ntaneti ohuru (ma obu chee aka na nke ohuru) ma mee nke oma
na fedora jiri FedUp na voila.
> Emebiri m site na mmelite
> Achọrọ m ịwụnye Rolling
Zaghachi Pablo Honorato
Na ezigbo 😀
N'ihi na ị na usoro, ị dị nnọọ nweta nkwalite na na ọ bụ ya, ihe niile bụ otu ihe dị ka ma ọ bụrụ na ị na and na arụnyere na site ọkọ, onye ahụmahụ
Ọ bụrụ n’ịgagharị, ị ga-ata ahụhụ, n’ihi na ọ bụrụ na ihe kacha kpọọ asị bụ mmelite, jiri Slackware ka mma (ha bụ mmelite ndị na-adịkarị ụkọ, mana ha ziri ezi). N'ọnọdụ ọ bụla ọzọ, m ga-akwado Debian Wheezy, ebe ọ bụ na ọ dị na mbipute 7.7 ma na-akawanye njọ na ọ edozila nsogbu GlibC na Chromium / Chrome.
Ọ dị ọnwa atọ, ị ga-akwado Slackware? Ọ ka mma ịnọ na Ubuntu maka nke ahụ, ihe ọ na-enweghị mmasị na ya bụ ịkwalite kwa ọnwa isii, yana Slackware ọ ga-emekwa ya, na mgbakwunye na ị ga-edozi ndabere na ịdabere ngwa, m ga-enye gị ya ka ị mee na, nwekwara obere software n'ihi na ị na-edekọ ya n'onwe gị bụ ọgba aghara na-enweghị Slackbuilds.
Ah afọ atọ m gụrụ na-ezighi ezi.
Okwesighi ka emelite ya, karia ibu ya nke 1GB, o gha adighi ike maka mgbanwe ole na ole.
Ọ dị njọ na ha gbanwere afọ 10 ma ememe ahụ gafere n'enweghị ihe mgbu ma ọ bụ otuto. Ma ọ bụ ndị dị otú ahụ. 😐: - / 🙁 😡: ->
Ewelitela, ọ gaghị aba uru. Ndị ọrụ ụlọ, na-anọ mgbe niile na LTS M ka nwere 12.04.4 naanị n'ihe gbasara nkwụsi ike LTS wepụtara nke ubuntu kachasị mma. Na-eche Trisquel 7 na ụbọchị ole na ole! na mmụọ nke ịmara ma ọ ga-amata wifi m.
Zaghachi ka ero
Anyị kwesịrị iburu n'uche na ụdị a nwere naanị nkwado ọnwa 9.
Zaghachi na pacoeloyo
Anọ m na-emegheSUSE Factory ... Gnome-Shell 3.14 na-apụta: D.
Enweela m ụfọdụ chinchi dị njọ na-emeghe na SUSS RC1 na Shell 3.14, anaghị m akwado ya maka mmepụta gburugburu, ọ ka dị oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na isiokwu dị iche na ndọtị, ndị kachasị ewu ewu anaghị aga ma ụfọdụ nwere nsogbu. na enweghị ndị a, Gnome Shell enweghị ike iji ya mee ihe n’uche m.
Mgbe m jisịrị ohiri isi na-eche, echere m, ma ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ m, na ọ baghị uru imelite.
14.10 a na - eweta nkwado maka ọnwa 9, dị ka afọ ime nwanyị, ha na - adịkarị jụụ karịa LTS.
N'okwu m, enwere ngwaike yana ụfọdụ mmemme anaghị arụ ọrụ maka m na kernel 3.16 mana na 3.13 ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Versionsdị ndị a nke etiti anaghị enwe isi, echere m na ha kwesịrị ilekwasị anya na LTS ma melite ha karịa ịmụ ọmụmụ nke ọnwa 9.
Na Debian Jessie kwagara na 3.16, na ihe niile dị mma. Ihe jọgburu onwe ya bụ na na mmelite ikpeazụ, dịka ha tinyere ụdị nke VMWare OpenGL sụgharịrị (nke pụtara n'ụzọ pụtara ìhè na m) nke mere ka ọbụna egwuregwu Steam dị arọ karịa mgbe m na-egwu na Windows. Ma m ga-ahụ nke ahụ na nnọkọ na mgbe m nọ n’ụlọ.
Maka ugbu a, m ga-echere ruo mgbe Ubuntu MATE Remix 14.04 kwụsiri ike nke ọma iji nwee ike inye ya ụtọ ụtọ.
Ndi Ubuntu Nwunye 14.04 Dị? Ọ gaghị abụ 14.10, n'ihi na anaghị m ahụ ntinye aka na Nwunye LTS, mana na mberede m mehiere.
Lapsus Calami na nke m, ebe ọ bụ na a mụrụ Ubuntu MATE na mbipute 14.10, ọ bụ ezie na iji obere ntinye nke Ubuntu ị nwere ike ịhazi desktọọpụ MATE ma ọ bụrụ na ị kpọrọ asị ịnwụ Unity interface.
Ndị na-apụta na etiti siri ike, a ga m agwa gị. Emelitere m ya na ihe niile di nma. Amara nke LTS bụ nkwado dị ogologo na ọ na-akwado ya, maka ndị sava ma ọ bụ ndị na-achọghị iche ọtụtụ ihe banyere sistemụ ma jiri ya rụọ ọrụ.
Ugbu a, ndị na-enwe mmasị ịnwe ngwanrọ na njirimara kachasị ọhụrụ, dị ka m, kwesịrị imelite mgbe ọ bụla ọhụụ ọhụụ kwusiri ike. Ihe ojoo banyere Ubuntu bu na obughi obara, oburu na achom ka m nwere ngwa ohuru dika Fedora, nke a na-emelite mgbe nile, mana na enweghi nsogbu, ma obu opekata mpe na interface.
Ọ bụ na nsụgharị etiti ahụ nwetara aha ọjọọ nye ụfọdụ ndị mmadụ, n'ozuzu ndị jere ozi dị ka mgbanwe gaa na nsụgharị ndị tozuru etozu nke gburugburu ebe dị iche iche, dịka Kubuntu 9.xx na 10.xx (ọbụlagodi Kubuntu 10.04 LTS echeghị) ma ọ bụ na Na nke Ubuntu, ngalaba 8.xx adịghị mma nke ọma na ihe niile 11.xx na site na 12.10 ruo 13.04, nke bụ ebe enwere nkwụsi ike, n'ihi iwebata na mgbanwe na-aga n'ihu na ịdị n'otu, ikpe Ubuntu 12.04 kachasị, ebe ọ malitere na ọtụtụ njehie, mana ndị a ka edoziri mgbe ọnwa ole na ole gachara (maka Ubuntu 12.04.2 enwere ike iwere ya dị ka nke kwụsiri ike).
Mana taa 14.10 kwesịrị ịkwụsi ike, ebe ọ bụ na mgbanwe dị na Unity dị obere na site na ihe m hụworo, systemD ebupụtabeghị, ma ọ bụ ihe ọ bụla sitere na Xmir ma ọ bụ Mir dị ka ndabara, nke bụ ndị nwere ike inye ndetu ahụ.
Echefuru m, n'ihe gbasara Kubuntu, Plasma 5 adịghị ka ọgba aghara dị ka mgbanwe site na KDE3.5x na KDE4 dị n'oge ahụ, ebe KDE4 bụ monstrosity na-enweghị ike ịkọwapụta mgbe ọ pụtara, ọ nweghị ihe e jiri ya tụnyere ịtụnanya ọ dị taa.
Achọrọ m n'ezie ihe oyiyi ndị ahụ!
Ọ bụrụ n’ịjiri ngwugwu Numix, ma ọ bụ ọbụlagodi Faenza, ị na-akwụwa aka ọtọ ịhapụ ihe ọ bụla.
Ndewo, amaara m na ọ nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma na weebụ site na Linux iji mee echiche na-esonụ, mana jiri isiokwu ahụ na ịde akwụkwọ nke onye edemede ahụ n'okwu a, m ga-etinye ihe egwu:
Ọ ga-abụ nke ukwuu ịjụ maka nkuzi na ụzọ kachasị nchebe iji mee nkwalite dist na Ubuntu? M na-ekwu ya dị ka akwụkwọ ntuziaka nke omume ọma tupu imelite. Amaghị m, ihe dịka ma ọ bụrụ na ọ ka mma ịkwụpụ mpaghara eserese ma ọ bụrụ na ị nwere amd ma ọ bụ nvidia gpu, wdg wdg ... bia, nkọwa ndị ahụ niile mmadụ na-echeghị na nke ahụ ga-emebi mgbe ọ na-emelite. .
ma ọ bụrụ na ị nwere lts ka mma ịga n'ihu na ya n'ezie, ka ha na-ekwu banyere ebe ahụ, ka anyị ghara ichefu lubuntu
Ndewo Friday m ebudatara Ubuntu 14.10 na acer m netbook nke nwere windo XP, ebe ọ bụ na ewepụrụ nkwado ahụ Achọrọ m ịnwale Linux, ebudatara m na websaịtị na zip wee wụnye ya na enweghị nsogbu, ọ matara PC na PC niile. ihe kachasị mma mgbe m malitere enwere m nhọrọ ịga xp ma ọ bụ na Ubuntu 14.10. Naanị m nwere otu nsogbu m na-amaghị ma ọ ga-adị ka nke ahụ ma ọ bụrụ na achọọ ihe nkedo, akara ngosi na ndị ọzọ nọ na Bekee, enwere n'ụzọ ọ bụla a pụrụ itinye asụsụ Spanish.
Echere m na ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị jụọ ajụjụ a na ajụjụ anyị na azịza ọrụ a kpọrọ Jụọ Site na Linux ka obodo dum nwee ike inyere gi aka na nsogbu gi.
Ọ dị mma, m mere nwelite ahụ, ọ bụ otu ihe ahụ dị ka 14.04, ihe dị iche na m bụ na ugbu a ọ na-arụ ọrụ ka mma, o doro anya na, mgbe ị na-etinye 14.04 ụfọdụ njehie na nwụnye kpatara na enwere njehie karịsịa na ntanetị njikọ njikọ ya odi ka emeziri ihe a, nke m bu uru, ekene m
Zaghachi na chibeto
Ndị enyi, kedu ihe ị kwuru gbasara nke a. Ọ ga - adị mkpa iji melite kpamkpam? Ihe na-eme bụ na m na-emelite ụdị m nwere, 14,04. Na emelitere m ịdị n'otu, wdg. M nwee ike rụọ ọrụ iji melite na 14.10, ma ọ bụ kwa arọ. Youkwesịrị imelite ihe niile?
Ntuziaka ikike dị na GNU / Linux na chmod
Iwu iji mara usoro (mata ngwaike na ụfọdụ nghazi ngwanrọ)